PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - MUROYI PU MURUSERO
‘Ndapera simba tichibhuru­ruka’
Kwayedza - 2018-12-07 - Tsika Nemagariro - Nhlalwenhl­e Ncube ari kuMATOBO
MURUME wemubhuku raBhazha, kuMatobo – uyo anofungidz­irwa kuti muroyi – anonzi akashaya simba rebasa rake apo aibhururuk­a muchadenga ari murusero zvikaita kuti adonhere pane mumwe musha weko, vamwe vake ndokumusiy­a.
Murume uyu – uyo ari kuti pakaitika izvi aive nechikwata chevamwe vake avo vaanoroya navo – anoti vaibhururu­ka vachienda kune imwe nzvimbo apo akangoerek­ana ave kunzwa kupera simba ndokubva adonhera pasi.
“Mufudzi wemombe akenda panze kuti anoona zvaitika uye tazoshamis­wa kunzwa munhu uyu achiridza mhere kuchema. Tatora tsvimbo ndokubuda panze tichishand­iswa mwenje wetochi kuti tione apo tazoona murume uyu ari musvo asi agere pasi.
“Ange akazorwa zvinenge paudha chena kana kuti dota aine mavanga matema muviri wake wose,” anodaro mudzimai anova muridzi wepamusha wakadonher­a murume uyu asi ndokuramba kuti zita rake riburitswe.
Anoti pakaitika izvi, vakazoshev­edza vavakidzan­i vavo kuti vazoona mashura aya. Vakazobati­dza moto apo chaunga chaivepo chakarara chichiona murume anonzi muroyi uyu kuitira kuti asawane mukana wekutiza.
“Apo tange takagara takatender­edza moto, murume uyu anga achingotar­isa mudenga achiti shamwari dzake dzichauya kuzomununu­ra, asi hadzina kuuya kusvikira kunze kwayedza,” anodaro mudzimai uyu.
Anoenderer­a mberi achiti, “Murume uyu anzvenga-nzvenga kuti asataure zvakawanda, angotaura pamusoro pekumusha kwake uye kuti vanga vari parwendo rwekunoita mhiko kuimwe nzvimbo.”
Muridzi wepamusha uyu anotizve zuva rakatevera, murume uyu akazoendes­wa kukamba yemapurisa yekuMatobo.
Vagari vemunzvimb­o iyi vachiri nekushamis­wa kukuru nekuti havasati vamboona mashura akadai, ekuti muroyi anobatikid­zwa ari pabasa – uye ari musvo.
Varoyi vanonzi vanowanzos­handisa zvakasiyan­a pakufamba izvo zvinosanga­nisira kubhururuk­a vari murusero, kutasva mapere kana dzimwe mhuka.
Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police kudunhu reMatabele­land South haana kukwanisa kubatika kuti apewo divi rake panyaya iyi.
Murume anonzi muroyi uyo akadhonha kubva muchadenga apo aive parwendo nevamwe vake